Ny Synoda Lehibe faha-38 n’ny FPMA izay nivory tsy mifanatri-tava, noho ny valan’aretina COVID 19, ny 30 oktobra 2020 ka hatramin’ny 01 novambra 2020, miarahaba sy mamangy ny ambaratonga rehetra (Faritany, Tafo, Fiaraha-mivavaka ary ny vahoakan’Andriamanitra ) eto amin’ny FPMA. Hampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin’ ny fahalalana tsara an’ Andriamanitra sy Jesosy Tompontsika. (2Pet.1.2)
" Koa dia iraka solon’ i Kristy izahay, toa an’ Andriamanitra mampangataka anay aminareo, solon’ i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe: mihavàna amin’ Andriamanitra anie hianareo." (1Kor.5.20)
Io no Teny fanevan’izao Synoda Lehibe faha-38 izao, izay mametraka amin’ny FPMA sy ny vahoaka eo aminy ny asa-iraka napetraky ny Tompo taminy, dia ny ho ambasadaoron’ny Tompo ho eto amin’izao tontolo izao, ka ho vavolombelon’ny fampihavanana notanterahin’i Kristy teo amintsika sy ny Ray, ary hanirahany antsika kosa hitondra fihavanana sy fanasitranana ho an’ny olona rehetra amin’ny alalan’ny fihavanan’izy ireo amin’Andriamanitra.
Tsy fanamby vaovao akory izany, fa tohin’ny ezaka izay efa natomboka tamin’ny Synoda Lehibe faha-37 tany Bordeaux manao hoe : " Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoahy ny demonia; efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana." (Mat.10.8)
Koa manohy ny asa napetraky ny Tompo taminy ny FPMA ary " nifampandinika hampandroso ny asa tsara sy ny fitiavana." (Heb.10.24)
Koa nandre ny Tatitra avy amin’ireo ambaratonga samihafa mikasika ny asany sy ny fiainanany ny Synoda dia naka ireto no fanapahan-kevitra lehibe ireto :
1. Nanatrika voalohany ny Synoda Lehibe ny Fiaraha-mivavaka FPMA Pussay sy Tsanta (La Réunion),
2. Namafisina ka nakana fanapahan-kevitra ny foto-pinoan’ny FPMA izay manamafy ny batisan’ny zaza atolotry ny Ray aman-dreny.
3. Mampianatra ny maha-voalohany an’iJesoa Kristy mba handavan’ny FPMA sy hanoroany hevitra ny tsy hanaovan’ny olony batisa fanindroany ary tsy maintsy hitenenana amin’ny teny tsy fantatra.
4. Nolaniana ny Litorjia D izay nohafohezina, hanampiana ireo litorjia efa ampiasaina ankehitriny. Ary natolotra ho andrana mandritra ny roa taona ireo litorjia samihafa eo amin’ny fanokanana sy fanekena (batisa, fanokanana diakona, fandraisana andraikitra sampana,...).
5. Nolaniana ny fanavaozana ny corps pastoral izay namerana ho70 taona ny fe- taona hisotroan’ny Mpitandrina ronono afa-tsy noho ny antony manokana sy ny hikarohana ny lalana rehetra hahazoana mamporisika sy manampy ireo tanora te-hianatra sy hiofana ho Mpitandrina. Tapaka koa fa tsy haka Mpitandrina efa nisotro ronono avy any amin’ny Fiangonana hafa ny FPMA
6. Noraisina ho Tafo ny Fiaraha-mivavaka Evry ka naka ny anarana FPMA EVRY Fitiavana, ary ao amin’ny Faritany Afovoany-Atsinanana no misy azy. 39 izany ankehitriny ireo Tafo eto amin’ny FPMA.
7. Nankatoavina ho Departemanta ny Vaomieran’ny teny malagasy ary entanina ny Tafo sy ny Departemanta mba harisika amin’ny fampianarana teny malagasy.
8. Manohy ny antso ny Synoda ny amin’ny hananana Mpitandrina Matihanina eo amin’ny Tafo sy ny Faritany rehetra.
9. Rehefa vita ny tatitry ny toe-bola 2019 ny FPMA sy ny Sampana iraisana dia nolaniana ny toe-bola 2019 sy ny teti-bola 2020.
Marihina fa araka ny fanapahan-kevitry ny Komity Maharitra izay nivory tamin’ny 03 oktobra 2020, noho ny tsy fahafahana manao fivoriana mifanatri-tava dia tsy hotanterahana amin’ity Synoda ity ny fanavaozana ireo tompon’andraikitra rehetra eto amin’ny FPMA (Birao Foibe, Mpandini-bola, Tompon’andraikitry ny Departemanta, sns...) fa hatao amin’ny famaranana ny Synoda faha-38 izay hatao rehefa afaka manatanteraka fivoriana mifanatri-tava.
Manentana antsika vahoakan’ny FPMA hifampitondra am-bavaka amin’ny asa rehetra tamin’ny alàlan’ny Synoda , « Koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ ny anaran’ ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara- pahatongan’ ny fahataperan’ izao tontolo izao » Mat. 28.19-20
Ny Filohan'ny Biraon'ny Synoda Past Solo Andrianomenjanahary
Ny Filohan'ny FPMA, Dr Seth Rasolondraibe